युएईमा दोश्रो म्युजिक अवार्ड हुँदै - प्रवास - कान्तिपुर समाचार
मंसिर ५, २०७४ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं — दोश्रो नेपाली म्युजिक भिडियो अवार्ड युनाइटेड अरब ईमिरेट्स (युएई) को अबुधाबीमा हुने भएको छ ।
सगिंक्षा फिल्मस् र नमस्ते ट्राभल्स एण्ड टुर्स युएईको संयुक्त आयोजनामा डिसेम्बर १ तारिकका दिन आबुधाबी स्थित फक्लोर थिएटर हलमा हुन गइरहेको छ । अवार्ड कार्यक्रममा नेपालबाट ४५ भन्दा बढी कलाकारहरू युएई आउने आयोजकका तर्फबाट नमस्ते ट्राभल्सका एकेन्द्रबहादुर थापाले वताए ।
नायक विवेक सिंह ठकुरी, बिरेन्द्र हमाल, नायिका निरूता सिंह, बिनिशा हमाल, नम्रता सापकोटा, सिपोरा गुरूङ्, महिमा सिलवाल लगायतका कलाकारहरु अबुधाबी आउनेछन् ।
त्यसैगरी हाँस्य कलाकार जितु नेपाल, शंकर बिसी, लोक तथा दोहोरी गायक खुमन अधिकारी र लोकनाथ सापकोटा आउने भएका छन् ।
कार्यक्रममा संगीत, म्युजिक भिडियो, म्युजिक भिडियो निर्देशक लगायत २२ बिधामा अवार्ड प्रदान गरिनेछ । त्यसैगरी ५ बिधामा युएईमा रहेर कलाकारितामा निरन्तरता दिएका नेपाली कलाकारलाई समेत अवार्ड प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
प्रकाशित : मंसिर ५, २०७४ १६:५०
क्लेप्टोमेनिया- चाेरी गर्ने बानी !
मंसिर ५, २०७४ डा. ललित कुमार मिश्र
काठमाडौं — कतै तपाईंको चोरी गर्ने बानी त छैनरु चोरी गर्ने बानी एक किसिमको मानसिक रोग हो । यस रोगबाट पीडित रोगी साधारण चोरको जस्तो समाजकोलागी खतरा या घातक हुँदैनन् । किनभने ऊ कुनै व्याक्तिगत फाईदा या जीवनयापनको लागि भनेर चोरी गर्दैन ।
अक्सर यस्ता मानिसहरु साधन सम्पन्न हुन्छन् र त्यतिकै आत्मसन्तुष्टीको लागीमात्र आफूलाई मनपरेको सामान चोरी गर्ने गर्दछन् । जुनवस्तुको वास्तवमा उनिहरुलाई आवश्यकता पनि हुँदैन । चोरी गरिसकेपछि यिनिहरुलाई एककिसिमको आनन्दको अनुभुति हुन्छ । पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरुमा यस किसिमको चोर्नेबानी बढी नै हुन्छ ।
कानूनि कारवाई तथा लोकलाजको डरले गर्दा मानिस यसको उपचार गराउन मान्दैनन् र पन्छिने गर्छन् । यसको मुलभुत समस्या भनेको रोगी स्वंय आफूलाइ कन्ट्रोल गर्न सक्दैन । नत स्वंय आफ्नो विवेकले काम गर्न सक्छन् ।
यस बानीले यिनिहरुलाई आत्मग्लानि, डर, स्वंयलाई दोषी मान्नु, भित्र अन्तरद्वन्द्व चल्नु जस्ता भावनात्मक समस्याहरुबाट लगातार पीडित भइरहेका हुन्छन् । परिवारजनलाई पनि समाजमा लज्जितहुनु पर्ने हुन्छ ।
यो पढ्दा शायद तपाईंलाइ हाँस्यपद कुरा लाग्छ होला तर यो समस्याको भयावता त मात्र यसबाट पीडित रोगी तथा रोगिको परिवारले मात्र बुझ्न सक्छन् । विदेशमा पनि चर्चित हस्तिहरु जस्तै बेलायतकी महारानी जोर्ज पाँचौं, केही प्रख्यात फिल्म अभिनेत्रीहरु पनि यस केलेप्टोमेनिया डिसअर्डरको शिकार भएका थिए ।
नेपालमा यस समस्या प्रति जागरुकताको कमी छ तथा चोरी गर्नुलाई ठूलै अपराध मानिन्छ । चोरी गर्दा पक्राउ पर्योम भने बदनामी हुनुको साथै कहिले काँही त गाली(गलौज तथा मारपिट हुने अवस्था पनि आउँछ । यस्ता व्यक्तिहरुको उचित समयमा सहि ढगंले उपचार गराउने र बिरामीलाई आपसी सहयोग दिने हो भने निश्चितरुपले यस समस्याबाट छुटकारा मिल्न सक्छ ।
यस समस्यालाई हल्कारुपमा लिनु भने हुँदैन । यस रोगबाट पीडित व्यक्तिसगं टाढा भएर, उसको बहिष्कार गर्नु हुँदैन । यस रोगको उपचार गाली गरेर या त्यस व्यक्तिको बेईज्जत गरेर हुँदैन ।
के हो क्लेप्टोमेनिया?
जब रोगी विना मतलव कुनै वस्तुको चोरी गर्दछ भने त्यसलाई क्लेप्टोमेनिया भनिन्छ । यस रोगमा व्यक्तिलाई बारम्बार चोरी गर्ने बानी लाग्छ । उ कुनैपनि वस्तु चोर्न सक्छ जस्तै– पसलको सामान, मानिसहरुको सामान, अफिसको सामान तथा साथिभाइहरुको सामान पनि चोरदछ ।
सामान्य चोरी गर्ने र क्लेप्टोमेनिया भएका व्यक्तिहरुमा धेरै फरक हुन्छ । एउटा साधारण चोरले आफ्नो आवश्यकताको सामानहरु नै चोरी गर्दछ भने क्लेप्टोमेनिक ९चोर्ने ईच्छा० व्यक्ति प्राय जसो यस्तो सामान चोरी गर्दछ जुन सामानको उसलाई कामै लाग्दैन र पछि त्यस समानलाई फ्याँकी पनि दिन्छ । उसले यो कार्य आफ्नो ईच्छालाई शान्त पार्नको लागी मात्र गरेको हुन्छ ।
होटलबाट चम्चा, तौलिया, नेप्किन, जस्ता सामान चोरीगर्ने धेरैजसो व्यक्तिहरुले कुनै लोभ(लालचले चोरी गरेका हुँदैनन्, यसरोगबाट पीडित भएर नै यस्तो कार्य गर्छन् । यो समस्या कुनैपनि उमेरका व्यक्तिमा हुन्छ ।
यो मानसिक रोगको कारण यही नै हो भनेर ठोकुवा गर्न मिल्दैन । यसको वास्तविक कारण थाहा हुन सकेकै छैन । मनोविद्हरुको भनाई अनुसार यसका केही थाह भएका कारण भने छन् । परिवारमा कसैलाई क्लेप्टोमेनिया छ भने अन्य सदस्यलाई पनि हुने बढी सम्भावना रहन्छ । मष्तिस्कमा रसायन पदार्थमा बदलाव हुनु, यसमा सेरोटिन व्यापकस्तरमा परिवर्तन हुन्छ र कम हुन्छ । यस कारणले पनि यो समस्या हुनसक्छ ।
यदि शुरुको अवस्थामा चोरी गरेको अपराधमा कसैलाई दन्ड(सजाय दिईंदैन र यतिकै छाडिन्छ भने, यसो गर्नुको मतलब त्यसलाई चोरी गर्न प्रोत्साहन दिनु हो । जसले गर्दा उसमा चोरी गर्ने बानी बस्दै जान्छ । जुन व्यक्तिमा यो समस्या हुन्छ । उसलाई अन्य मानसिक समस्या जस्तै व्यग्रता, बाईपोलर डिसअर्डर, ओसिडी, तथा अन्य मानसिक समस्याहरु पनि हुनसक्छ ।
लक्षण( क्लेप्टोमेनियाको लक्षण यहि नै हो भनेर भन्न बढो गाह्रो छ । पीडित व्यक्तिले त्यस्ता खाले सामानहरु चोर्छद्द् जसको उसलाई आवश्यकता छैन । चोरी गर्नुभन्दा अगाडि तनाव र चोरी पछि खुशी र सन्तुष्टी महशुस गर्नु । सामान चोरी गरेपछि उदास हुनु र कानुनी कारवाही गर्लान कि भन्ने डर लाग्नु । बारम्बार चोरी गर्न मन लाग्नु आदी । मनमा चोर्ने इच्छा तिब्र रुपमा जागेर आउनु र आफूलाई रोक्नसक्नु ।
यस रोगबाट कसरी बाहिर निस्किने ?
यो केवल मानसिक रोग हो भन्ने परिवारको सदस्यले सबैभन्दा पहिला बुझिदिनु पर्छ । यस रोगबाट ग्रसित व्यक्तिहरु आफ्ना परिवार तथा ईष्टमित्रहरुको सामुने लज्जित हुनु वा हप्पकिखानुबाट बच्नको लागि आफ्नो यथार्त कुरोलाई सक्दो लुकाउने गर्दछन् । जसले गर्दा यो समस्या धेरैजसो लामो समयसम्म देखिन्छ । यदि तपाईं क्लेप्टोमेनिक हो भने सबैभन्दा पहिले आफ्नो समस्याको बारेमा आफ्नो परिवारको सदस्यहरुलाई भन्ने र परिवारजनले पनि पीडित व्यक्तिको समस्यालाई मजाक बनाउनुको सट्टा गम्भिरता पूर्वक लिने ।
साईकोलोजिष्टको भनाईनुसार जो व्यक्ति यसरोगबाट पीडित छ उसले एकलै बस्नु हुँदैन । साथीभाइहरु वा आफन्तको बीचमा बस्नु राम्रो हुन्छ । डिप्रेशनबाट बच्नु पर्छ । जब चोरी गर्ने तिव्र ईच्छा मानमा जाग्रीत भएमा आफन्तलाई भन्ने र परिवारका सदस्यले पनि उसको ध्यान अन्तै लानको लागि उसलाई कुनै काममा लगाउने ।
यस रोगबाट पीडित व्यक्तिले चाहेमा यस रोगबाट मुक्त हुन सक्छन् । यसको लागि आवश्यक छ सही उपचार, मजबुत ईच्छाशक्ति तथा साथिभाई र आफन्तहरुको भावनात्मक सहयोग । यसको उपचारमा साईकोथिरापी र औषधि दुवैको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । साईकोलोजिष्टले यसलाई एडिक्टिव डिसआर्डर र आब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डरको श्रेणिमा राख्दछन् । यसको लागी काउन्सलिंग गरिन्छ । काग्निटिव बिहेभिएरियल थिरापीबाट पनि त्यसता व्यक्तिमा रहेको नाकारात्मक व्यवहारलाई बद्लिन र साकारात्मक व्यवहारलाई बढाउन कोशिश गरिन्छ ।
क्लेप्टोमेनिया ९ चोरीगर्ने ईच्छा० –बिनामतलबको चोरी गर्ने बाध्यता– एब्सिनथियम, आर्टिमिसिया भल्गेरीस, कुरारी, नक्स भोमिका । बिनामतलब केवल रुपैयाँ चोर्ने बाध्यता – कल्केरिया कार्ब । बिनामतलब स्वादिष्ट खानेकुरा चोर्ने बाध्यता– मेग्नेशिया म्युर तथा नेट्रम कार्ब । यसै गरी ब्रायोनिया, कालिकार्ब, लाइकोपोडियम, पल्साटिला, सिपिया, स्टेफसिग्रिया, स्टामोनियम, टेरेन्टुला, थुजा आदी । रोगीको समष्टिगतलक्षणको आधारमा प्रयोग गर्नसकिन्छ ।
प्रत्येकरोगीको औषधी, औषधिको मात्रा उसको शारीरिक एवं मानसिक अवस्था अनुसार भिन्ना–भिन्नै हुन्छ । होमियोप्याथिक चिकित्सामा रोगको कारणलाई हटाउने प्रयास गरीन्छ । अतस् बिना चिकित्सकीय परामर्श यहाँ उल्लेख गरिएका कुनैपनि औषधिको उपयोग नगर्नु होला ।
मलेसियामा हिमालयन म्युजिक अवार्ड, टीका बम्जनलाई ‘उत्कृष्ट वर्ष गायक’ को उपाधि
१२ वर्षीया आयुष्काको गीत
कतारमा नेपालद्वारा सिङ्गापुर ७–१ पराजित
यूएईमा नेप्लिज स्पोर्टसलाई एक लाख
एनआरएनए साउदीद्वारा बिद्यालयलाई सहयोग
पूर्वमन्त्री ढकाल संलग्न संस्थाको भिसाबाट कोरिया पुगेका नेपाली सडकमा माग्दै